COVID ကာလအလွန် Engineer များနဲ့ အလုပ်အကိုင် · MyWorld
COVID ကာလအလွန် Engineer များနဲ့ အလုပ်အကိုင်
23 Apr 00:00 by George Aung
​သင်ဟာ Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသလား? ဒါမှမဟုတ် တခြား Industry ထဲက Professional Career လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူ ဖြစ်ပါသလား? သင်တို့ရော အလုပ်အကိုင်များကို ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ရှာနေကြပါသလဲ? ကျွန်တော်တို့ Employees တွေကတော့ အလုပ်လုပ်ချင် အလုပ်ရှာချင်နေကြတဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။ ဒါတော့ Professional ကျကျအလုပ်ကိုဘယ်လိုရှာကြမလဲ? အထူးသဖြင့် Engineer တွေပေါ့။
အခုလတ်တလောမှာ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် စီးပွါးရှင်တွေဘက်က ဝန်ထမ်းလျှော့ချတာတို့၊ Employee Contract ရပ်လိုက်တာတို့၊ Project ရက်တန့်မှုများနဲ့ကြုံနေရမှာ အသေအချာပါ။ ဒါပေမယ့်တစ်ဖက်မှာလည်း ဒီကပ်ရောဂါပြီးသွားရင် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ Plan တွေ ဒီထပ်ကောင်းတဲ့ Opportunity အသစ်တွေ ထပ်ထွက်လာမယ်ဆိုတာ အသေချာပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေအထားအရကြည့်ရင် Developing နိုင်ငံဖြစ်နေလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ Developing Country ကနေ Developed Country ကိုကူးပြောင်းနေစဉ်အတွင်း Engineer အများအပြားလိုအပ်မည်မှာအသေအချာပါပဲ။ စျေးကွက်ထဲမှာ Demand ဖြစ်တဲ့ Engineering အလုပ်အကိုင်တွေကလည်းဆက်လက်ပြီးများလာဦးမှာပါ။ ဒါကြောင့် အလုပ်ကရပ်ဆိိုင်းခံလိုက်ရပြီဆိုရင်လည်း စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ အခုချိန်မှာ မိမိကိုယ်ကို အချိန်ပေးပါ။ Online ပေါ်က Interview ဖြေနည်းများလေ့လာပါ။ Opportunity တွေကလည်း ဒီကပ်ရောဂါကြီးအပြီး သင့်ကိုစောင့်နေမှာပါ။
Opportunity တွေဘယ်လိုရှာရမလဲ? တွေ့ရာနေရာမှာ တွေ့သမျှ Company တိုင်းမှာ Job Site တိုင်းမှာ CV မတင်ပါနဲ့။ အရင်ဆုံး Requirement နဲ့ Job Description ကိုဖတ်ပါ။ ဘယ်အလုပ်ဟာ မိမိနဲ့အကိုက်ဆုံးဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင်သိပါတယ်။ လုပ်ချင်တာနဲ့ လုပ်တက်တာ ကွဲပြားတက်ပါစေ။ မိမိဘွဲ့ရှိရုံနဲ့ အလုပ်လွယ်လွယ်မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် Engineer ကျောင်းတက်ထဲက ဘယ် company တွေက မိမိရဲ့ ဘွဲ့နဲ့ အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာပါတစ်ခါတည်း လေ့လာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် Salary ကို အဓိက မထားပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့ သိထားတဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကပြောရရင် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ Top Salary Paid အများဆုံးကတော့ Oil & Gas ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာနိင်ငံ ရဲ့ အနေအထားအရ Oil & Gas, Energy Industry က တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာပါပြီ။ ဒုတိယ အများဆုံးအနေနဲ့ Construction နဲ့ Manufacturing Industry တွေဖြစ်ပါတယ်။ တတိယကတော့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေ စက်ရုံလုပ်ငန်းတွေပါ။ အခုချိန်မှာ International Company တွေက မြန်မာနိုင်ငံကို မျက်စိကျပြီး လာရောက်ရးသ်းနှီးမြှုပ်နံသူ အများအပြားလဲတွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိမှာ တဟုန်တိုးထိုးတက်လာတာကို သိသိသာသာ နဲ့တွေ့ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဒီ Industry တွေမှာ Employees တွေတော်တော်များများ လိုအပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် Engineer များ ဒီ COVID-19 Outbreak ကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားရင်လည်း ဘာမှမစိုးရိမ်ကြပါနဲ့။ မိမိရဲ့ CV ကို အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီး MyWorld မှာ Engineering Jobs မှာ အလုပ်ရှာလု်ကြပါစို့။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှကုမ္ပဏီကြီးတွေကို အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်းတွေကို လူမှန် နေရာမှန် အလုပ်အကိုင်မှန်ရောက်အောင် Candidate နှင့် Client ကြား အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားချိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဗျ။